Macluumaad kooban:- Dayax Madobaad xalay ka dhacay guud ahaan Dunida “hal sano iyo jeer”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaMacluumaad kooban:- Dayax Madobaad xalay ka dhacay guud ahaan Dunida “hal sano iyo jeer”.
Dhamaan qaaradaha Dunida Saqdii dhexe ee Xalay waxa qaarkood laga arkay Dayax-madoobaad oo uu awoodi karay qof walbo cirka ama samada Eega.
Dayax-madoobaadkan ayaa meelaha laga arkay waxa ka mid ah bariga Qaaradda Afrika oo ay ku jiraan deegaannada Soomaalidu degto.
Dayax-madoobaadka oo bilaabmay Saacadda bariga Afrika markii ay ahayd 11:30-kii ayaa socday muddo dhowr Saacadood, isagoo Dayuxu si tartiib-tartiib ah u soo cadaanayey Saacadba Saacadda ka dambaysa, illaa markii dambe uu wada Cadaaday.
Dayax-madoobaadka ayaa ka mid ah Calaamadaha waaweyn ee Allaah SW, sidaasi awgeed ayaa Dadweynaha ku nool Dalalka Muslimka ah ee Dayax-madoobaadka laga arkaa waxay oogaan Salaad, taasi oo la wado illaa inta uu Dayuxu ka Caddaanayo.
Sannadkan gudihiisa, waa markii labaad ee Dayuxu Madoobaado.